kupinza kupisa | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
Nei Sarudza Induction Kupisa uye ndedzipi mabhenefiti ayo
Categories Technologies Tags zvinyorwa zvekupisa kwekuchera, induction heat, induction kupisa zvinobatsira, induction kupisa zviri nani, nei uchisarudza induction heater, nei uchisarudza kupisa kupisa
Induction Kuchirisa Kuchengetedza kweByanic Coating
Induction Heating inoshandiswa kuporesa hupfeko yakakosha sepende pamasitemu esimbi nekuita kupisa pamwe nekubvisa. Izvi zvinoreva kuporesa kunowanikwa kubva mukati kutadzisa maitiro ekugadzira zvipfeko zvekupfeka. Chimiro chekushanda ndiko kuoma kwepende pamashizha endarira.
Induction Kuchenesa kwemativi esimbi kunamatira induction healing kutsetseka kunoshandiswa mumatokisi akawanda emotokari, zvakadai sekushandiswa kwetimutirasi inonzi thermosetting kuti ibudise mahwendefa echigamba, shangu dzokunyorera uye auto bumper components. Shafts inowanzobatanidzwa kune rotor cage rotors mukugadzira motokari duku. Mukunyora mishonga, mapurasitiki ezvo anoomerera akabatanidzwa kune aluminium rotors; imwe glue inonzi thermoplastic inoshandiswa kubata zvipfeko zvemapurisa pasimbi shafts. Kamwe kana mabheji apera, shaft inopisa uye kuputika kunopera.
Modern induction heat inogona kugadzirisa zvizhinji zvezvinetso izvi. Kuchenesa nekudzikinura kunopa kuvimbika, kudzokorora, kusina kuonana uye kushanda nesimba kunopisa munguva shoma, kuitira kuti kurapwa kunogona kupedzerwa nechinguva chisina simba nenguva. Kuvandidzirwa kwekushisa kunotsika-shanduka kunogona kuwanikwa nekombiyuta kutungamira kwesimba rakasimba renyika. Kuti abvise matanho ezvimwe zvekutakura nekudzikinura huvheni, zvitubu zvekupisa zvinyorwa zvinogona kuiswa mumutsara wekugadzira. Pakupedzisira, kupisa kwekutsvaga kunogona kuitwa munzvimbo dzakachena zvakanyanya, mamiriro ekudzivirira kana nzvimbo dzakasiyana-siyana, zvichibvumira kuporesa zvakakwana zvirongwa.
Kunyange zvazvo kupisa kwekutsvaga kunowanzoshandiswa nesimbi kana zvimwe zvinhu zvinogadzirisa, plastiki nezvimwe zvinhu zvisiri izvo zvinoita kuti zvigadziriswe zvakanyanya kuburikidza uchishandisa senzeti inogadzirisisa inotengesa kupisa. Simba reRF rinowedzera induction healing zvikumbiro zvinotangira kubva pa4 kusvika 60kW, zvinoenderana nezvidimbu uye zvido zvekushandisa.
Categories Technologies Tags induction healing, induction curing heat, induction heat, induction Organic Coating, organic coating